Quful xiritaanka wuxuu kordhiyaa isticmaalka xashiishka iyo weedka ku soo koraya guriga • Dawooyinka Inc.eu
Nederland - Cilmi baaristii ugu dambeysay ee uu sameeyay machadka Trimbos ayaa muujisay in uu kordhay isticmaalka xashiishadda sanadkii la soo dhaafay. Tan waxaa laga akhrisan karaa barta internetka ee nos.nl. Isticmaalka daroogada xafladaha iyo khamriga, dhanka kale, wuu yaraaday. Sababta? Fayraska corona iyo tallaabooyinka la xiriira.
1 Sababta kororka isticmaalka xashiishadda
2 Si wada jir ah ugu sariirta sariirta guriga
3 Weedkeebaa ugu fiican sigaar cabista?
4 Ku koritaanka guriga ayaa noqda mid caan ka ah
5 Ku koritaanka haramahaaga guriga waa wax fudud
6 Khibrad ma leh. Laakiin wali waxay rabaan inay koraan haramaha?
7 Top 3 weed ugu fiican inta lagu jiro qufulka
8 Ku saabsan Weedseedsexpress
Sababta kororka isticmaalka xashiishadda
Kordhinta isticmaalka xashiishadda xilligii corona waa natiijo macquul ah oo ka soo baxda dhammaan xaddidaadaha jameecada ee Nederland ku qasban tahay inay la tartanto. Nolosha habeenku waxay ku jirtaa daloolkeeda ciidahana dib ayaa loo dhigaa xilligan. Laakiin baahida ay u qabaan dhalinyarada inay kulmaan oo xaflad wada yeeshaan dabcan ma baabi'i doono. Natiijadu waxay tahay, gaar ahaan dhalinyarada, inay ku kulmaan guriga.
Si wada jir ah ugu sariirta sariirta guriga
Nu Nederland wuxuu kujiraa qufulka oo waxaa jira bandow, waa in la raadiyaa waxyaabo kale si si nabadgalyo ah ay isugula kulmaan. Waxaa soo baxday in badankood (> 83%) ay ku kulmaan guriga. Markaa wax lala yaabo maahan in xashiishadda ay noqotay cunsur mideysa. Wada qaboojinta, dhageysiga muusikada iyo wada sheekaysiga qotada dheer ayaa si fudud uga wanaagsan wadashaqeyn si fiican loo duubay.
Weedkeebaa ugu fiican sigaar cabista?
Sababtoo ah kooxo waaweyn hadda macquul ma ahan, xitaa guryahooda, dhalinyarada waxay doortaan inay ku kulmaan kooxo yar yar. Ma ahan in la bilaabo xaflad aad u wanaagsan, laakiin waa in la helo is dhexgal iyo nasasho wada jir ah. Xulashada 'fadhiistayaasha guriga' ayaa markaa loogu talagalay nooc ka mid ah xashiishka oo nasiiya nasashada isla markaana xaqiijiya shucuur iyo farxad farxad leh. Ku raaxayso sariirta-qufulka aan la fahmi karin wada jir. Si tan loo gaaro waxaad u baahan tahay weelka saxda ah. Noocyada Indica ayaa markaa ah kuwa ugu habboon. Ka fikir: OG Kush ama Blue Dream.
Weed Sativa waa caan yar, maxaa yeelay waxay siisaa waxyaabo badan oo qarxa oo firfircoon sare. Ilaa aad rabto inaad ku martigeliso xaflad weyn oo qoob-ka-ciyaarka guriga, Indica waa xulasho ka wanaagsan fiidnimo nasasho leh asxaabta guriga.
Ku koritaanka guriga ayaa noqda mid caan ka ah
Xashiishadda sii kordheysa ayaa sidoo kale caan ku noqotay tan, waxay ogaatay Weedseedsexpress, dukaan Dutch ah oo iniinyaha xashiishadda ah. Waxaa jiray koror cad ilaa Maarso 2019 soo iibso abuurka xashiishka loogu talagalay isticmaalka guriga. Nederland iyo adduunka intiisa kale.
In kasta oo amarada ugu badan ee Yurub laga soo diro Weedseedsexpress, haddana waxaa sidoo kale jiray dalab xoog leh oo loogu talagalay abuurka xashiishka ee ka yimaada Netherlands. Halkii aad aadi laheyd dukaanka kafeega markasta, waxaa jira baahi sii kordheysa oo loo qabo in naftaada la beero xashiishka
Ku koritaanka haramahaaga guriga waa wax fudud
Sababta ay inbadan oo kamid ah beeraleyda guryaha ay ugu biirayaan sidoo kale maxaa yeelay kororka haramahaaga ma aha mid aad u dhib badan. Sidaas awgeed badanaa waa miraha autoflower in badan baa la iibiyaa. Sababtoo ah xashiishka ku sii kordhaya abuurkaani waxay xaqiijinayaan goosasho la hubo maxaa yeelay iyagu si dhib yar uma baahan fiiro gaar ah. Abuurka Autoflower waa cafis.
Autoflowers ayaa markaa ah iniinyaha xashiishka ku habboon ee bilowga ah iyada oo aan laga gaabin dhadhanka ama tayada. Khasaaraha kaliya ee soosaarayaashaan ayaa ah in waxsoosaarka ay waxyar ka yar yihiin miraha aan autoflower ahayn. Laakiin waqti ubax dhakhso leh ayaa ka dhigaya iyada. Sidan ayaad alaabadaada haramaha ah uga dhigeysaa mid heer sare ah, adigoon dadaal badan sameynin.
Marka laga soo tago xaqiiqda ah in kororka dooggaaga uu yahay wax fudud, waxay leedahay xitaa faa'iidooyin badan. Ka fikir lacagta. Abuurka xashiishka ayaa ka raqiisan weelka diyaarka u ah in la isticmaalo mar walbana waxaad haysataa xashiishad aad doorbidayso.
Khibrad ma leh. Laakiin wali waxay rabaan inay koraan haramaha?
Ma lihid khibrad sii kordheysa? Mise waxaad ka shakisan tahay inaadan lahayn faro cagaaran? Laakiin miyaanad dareensanayn inaad iibsato doog-diyaarsan-in la cuno markasta? Kadib websaydhka Weedseedsexpress waxaad ka heli doontaa hage bilow ah oo ku saabsan beerashada gudaha iyo dibaddaba. Buugyarahaan waa bilaash.
Top 3 weed ugu fiican inta lagu jiro qufulka
Sidaad u akhriday bilawgii maqaalka, waxaad u badan tahay inaad u socoto xashiishad kaa nasin doonta asxaabtaada halkii aad ka ahaan lahayd hyperactive. Si lagaaga caawiyo inaad sameyso doorashadaada, waxaan diyaarinay liistada ugu sarreysa 3 ee miraha autoflower sariir-xirida.
Gorilla xabagta Autoflower
Cheese Buluug ah
Isticmaalka xashiishku wuu kordhayaa inta lagu jiro qufulka. Waa maxay doogga 3-aad ee ugu sarreeya xilligan? (afb.)
Ku saabsan Weedseedsexpress
Laga soo bilaabo 2005, seddex saaxiib (Roger, Frank iyo David) ayaa Weedseedsespress ka bilaabay xiisaha ay u qabaan weed. Waxay wadaageen aqoon ku saabsan noocyada kala duwan ee abuurka xashiishadda iyo sida ugu wanaagsan ee loo abuuri karo abuurkan. Aakhirkii waxay go’aansadeen inay u adeegsadaan isku xirnaantooda, aqoontooda iyo khibradooda qaab ka duwan. Adoo la wadaagaya adduunka adoo adeegsanaya Weedseedsexpress. Websaydhka waxaad ka heli doontaa ku dhowaad 100 nooc oo ah abuurka xashiishadda oo tayo sare leh oo aad si dhammaystiran ugu dalban karto.
Adeeggu waa muhiimad weyn Weedseedsexpress. Tani waxay ka dhigan tahay gaarsiin deg deg ah iyo dammaanad tayo sare leh. Haddii aad dalbato ka hor 15.00 galabnimo, miraha xashiishadda ayaa la geyn doonaa maalinta ku xigta. Oo haddii tayada iniinyaha xashiishka ay niyad jab tahay, waxaad heli doontaa shixnad cusub oo bilaash ah. Intaa waxaa dheer, khariidadda caawimaaddu marwalba waa la heli karaa si looga jawaabo su'aalaha macaamiisha.
cannabisbeerista cannabisEuropakoraanxiridNederlandthuisbeerista cannabis
Cilmi baaris: Terpenes waxay ku daydaan oo ay kobciyaan waxqabadka cannabinoid
Terpenes, Molikuyuullo soosaara urta oo mas'uul ka ah dhirta marijuana iyo urta udgoon ee udgoon, shaqo ...
Terpenes waa mowduuc aad u kulul adduunka xashiishka. Waxaa jira in ka badan 100 nooc oo terpenes ah oo xashiish ah ...